IVirginia iAtlantic isungula iiNdiza eziPhinda-phinda ngeVeki eziya eBahamas
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeBahamas Breaking » IVirginia iAtlantic isungula iiNdiza eziPhinda-phinda ngeVeki eziya eBahamas
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba zeBahamas Breaking • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Caribbean • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
ISebe lezoKhenketho kunye nezoPhapho laseBahamas lonwabile ukwazisa ukuba iVirgin Atlantic Airlines izakusebenzisa iinqwelomoya ezimbini ngeveki ukusuka eLondon Heathrow Airport ukuya eNassau, eBahamas, ukuqala ngoNovemba 20, 2021.
Kukho imfuno ekhulayo phakathi kwabahambi base-UK abafuna i-tropical, i-Bahamian yokubaleka.
Iinqwelomoya ezizayo zeVirgin Atlantic ziqala ngoMgqibelo, nge-20 kaNovemba kulo nyaka.
Eli lixesha elifanelekileyo lokucwangcisela ukubalekela eBahamas enelanga kwaye ishushu ukusuka kwixesha lokuwa elibandayo e-United Kingdom.
Ngothintelo lohambo olwenza lula kwihlabathi liphela, iiBahamas zijonge phambili ekuqhubekeni nokwamkela iindwendwe zibuyele kunxweme lwayo.
"Sinovuyo olukhulu ngeenkonzo ezitsha zokuhamba ngenqwelo moya kabini ngeveki kwisikhululo senqwelomoya saseHeathrow eLondon, utshilo uMphathiswa wezoKhenketho nezoPhapho, u-Hon. UDionisio D'Aguilar.
"Kukho imfuno ekhulayo phakathi kwabahambi base-UK abafuna ukubaleka, i-Bahamian yokubaleka. Sijonge ukubamkela kunxweme lwethu oluhle ukuze bafumane into eyenza ilizwe lethu libe yindawo eyodwa yokuya kwiCaribbean ngokungafaniyo nenye. ”
Abahambi kwiindiza zeVirgin Atlantic ezizayo-ukuqala ngo-Novemba 20-banokulindela okona kulungileyo Yintoni ekufuneka inikwe yiBahamas. Ngelixa use siqithini, ii-wanderlusters ziya kufumana ukuphumla kunye nokuzonwabisa okumnandi ngenkcubeko etyebileyo, indawo yokutyela yaselwandle ukuya etafileni kunye nezinto ezintle zendalo. Ukusuka kwiisanti ezifihlakeleyo kunye nolwandle olufihlakeleyo olunesanti epinki, ukuya kungena ngokuntywila kwimingxunya eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nokuqubha neehagu, kukho into eyonwabisayo kuye wonke umntu. Ungayichazanga eyokuba, iDowntown Nassau ibonelela ngeebhloko ezikwisikwere ezingama-20 zesikhumbuzo, imizobo kunye neemyuziyam kwabo bafuna ukuntywiliselwa kwiimbali zeBahamas zeenkulungwane zakudala. Iinqwelomoya ziya kuthengiswa nge-11 ka-Agasti ka-2021, kunye nokubuya kweenqwelo moya eziqala kwi- $ 990.
Abo bafuna ukubhukisha iholide yabo elandelayo, nokuba kuseNassau okanye kwisiqithi esijikeleza kwiiIqithi ze-Out, banokuya www.bhahamas.com/deals-packages okanye ujonge abameli babo behotele ukuze ufunde ngakumbi ngeentengiso kunye neephakeji ezikhoyo kwiinyanga ezizayo.